Mareykanka Oo Xaqiijiyay in Sedax Askari looga dilay Weerar Ka Dhacay Duleedka Kaabuul.
Tuesday April 09, 2019 - 08:58:22 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya wadanka Afghanistan ayaa sheegaya in ciidamo American ah lagu dilay weerar naf hurnimo oo xoogaga Xarakada Jihaadiga Taliban ay ka fuliyeen meel ku dhow magaalada Kaabuul ee caasimadda u ah wadankaasi.
War rasmi ah oo kasoo baxay Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa lagu sheegay in Sedax Askari American ah iyo sarkaal howlgab ah lagu dilay weerar shalay ka dhacay hareeraha garoonka Bagram ee duleedka magaalada Kaabuul.
Mareykanku wuxuu sheegay in gaari walxaha qarxa lagasoo buuxiyay lagu beegsaday kolonyo ciidamo ah oo ku socdaalayay gobolka Barawaan oo qiyaastii 50Km ujira magaalada caasimadda ah "Sedax katirsan ciidamada Mareykanka iyo sarkaal howlgab ah oo u shaqenayay shirkad dhanka amniga ayaa ku dhintay weerar ka dhacday meel ku dhow saldhigga Bagram" ayaa lagu yiri war kasoo baxay dowladda Mareykanka.
Sedax askari American ah ayaa lagu dhaawacmay weerarka balse isbaheysiga NATO ma sheegin jinsiyadda uu heysto sarkaalka howlgabka ah ee isna lagu dilay weerarkii shalay waxaana loo badinayaa in uu kasoo jeedo dalka Mareykanka.
Dhinaca kale Imaarada Islaamiga Afghanistan (Taliban) ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkan askarta lagu dilay sida uu bartiisa Twitterka ku qoray Sheekh Dabiixullaahi Mujaahid oo ah Afhayeenka Taliban "Gaari gaashaaman ayaa gabi ahaantiisba burburay tiro kamid ah soo duulayaasha dhimasho iyo dhaawac ayay ku noqdeen weerarka mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ah ka fuliyeen duleedka Bagram" sidaas waxaa yiri Dabiixullaahi Mujaahid.
Waa askartii 7aad oo dowladda Mareykanka ay qirato in looga dilay wadanka Afghanistan tan iyo billaawgii sanaddan 2019 balse Taliban waxay sheegaysaa in khasaaraha ciidamada Mareykanka ee Afghanistan sanadkan gudihiisa uu gaarayo tobanaan dhimasho ah.